पूर्वराजा वीरेन्द्रको भेटियो ८७ अर्ब सम्पत्ति – मुलधार न्युज
Home > अर्थ/बजार > पूर्वराजा वीरेन्द्रको भेटियो ८७ अर्ब सम्पत्ति
१९ आश्विन २०७५, शुक्रबार ०७:४५
काठमाडौं – स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र उनका परिवारको नाममा अहिलेसम्म करिब ८७ अर्बको चल अचल सम्पत्ति भेटिएको छ। नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले हालसम्म वीरेन्द्र र उनको परिवारको चलअचल सम्पत्ति ८७ अर्ब भएको अनुमान गरिएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकमा नेपाल ट्रस्टका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले अहिलेसम्म ८७ अर्बको रकम प्राप्त भएको बताए। सो सम्पत्तिलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना बनाएर परिचालन गरी आएको रकम शिक्षा र स्वास्थ्यमा लागानी गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए। सो कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका तयार गरिएको पनि उनले बताए।
यसैगरी, विदेशी मुद्रा अन्तर्गत हालसम्म ४९ हजार पाउण्ड, १ लाख ४१ हजार डलर प्राप्त भएको छ भने नविल बैंकमा ४ लाख ३५ हजार सेयर, होटल अन्नपूर्णमा ३० हजार ५ सय ३० सेयर, नेपाल पब्लिक निगममा ३७ सय ५० सेयर लगानी देखिएको छ।
तयस्तै, रत्नमन्दिर पोखरा, दियालो बंगला चितवन र मकवानपुरके बंगलामा अचल सम्पत्ति रहेको उनले बताए। पोखराको फेवातालमा मात्रै करिब २ सय रोपनी जग्गा रहेको उनले जानकारी दिए । हालैमा दुईवटा जग्गा फेला परेको पनि उनले बताए।
पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाका नाममा उहाँ बसेको १५ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गालाई सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल ट्रस्टको नाममा ल्याइएको छ भने प्रेरणाको नजिकै एकजना व्यक्तिको नाममा रहेको अढाई रोपनी जग्गा पनि एक महिना अघि ठाउँ छोड्न आदेश दिइएको उनले बताए। २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको वंशनाश हुनेगरी राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो।
२०६२/०६३ को आन्दोलनपछिको परिवर्तनले राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि वीरेन्द्र र उनको परिवारको सम्पबिको खोजी गर्न अन्तरिम संविधानमा नेपाल ट्रस्टको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको थियो। अन्तरिम संविधानको धारा १५९ मा नेपाल ट्रस्टको विषयमा उल्लेख गरिएको थियो । जसबमोजिम २०६४ साल मंसिर ६ मा नेपाल ट्रस्टको स्थापना गरिएको थियो।
पूर्वराजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य र उनका छोरा दिपेन्द्र, निराजन र छोरी श्रुतीका नाममा रहेको सम्पत्तिको खोजबिन स्वदेश र विदेशमा भइरहेको नेपाल ट्रष्टका सचिव डा. सिंहले जानकारी दिए।
नेपाल ट्रष्टका सचिव डा. सिंहले राजा वीरेन्द्रका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति खोजी गर्नका लागि गठित सात सदस्यीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पनि प्राप्त भएको बताए। उनले नेपाल ट्रस्टका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिए।
समितिले सम्पत्ति रहेको जानकारी दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरेमा लुकेर रहेको चल अचल सम्पत्ति अझै भेटिन सक्ने सुझाव दिएको बताए। उनले अब विदेशमा लुकाइएको सम्पतिमा नेपाल ट्रष्टको ध्यान गएको बताए।आजको नागरिकदैनिकमा यो खबर छ ।